2016 Sahanka –Khibrada Loo-adeegayaasha (Oct) Survey
2016 Sahanka –Khibrada Loo-adeegayaasha (Oct)
Ku socota loo-adeega-yaasha yada...
Wzxaan ku waydiisanaynaa kaalmadaada si aan u qiimayno adeegyadayada iyo barnaamij-yadayada. Waxaan rabnaa in ann ogaano sida aad u aragti sida aan wax u qabano iyo inaan si sidaa ka sii fiican wax ugu qabankarno. Waxaan doonaynaa aragtidaada oo daacad ah.
Fadlan La soco: Magacaagu kama muuqan –doono sahankan..Jawaabahaagu waxay noqondoonaan qarsoodi. Jawaabahaaga gaarka ah lalama wadaagi –doono shaqaalaha. Hadii aad go’aansato in aanad ka jawaabin su’aalahani waxba uma dhimi- doonto adeega aad ka heshid halkan.
Marka aad ka jawaabaysid su’aalahan waxaad madaxa ku haysaa barnaamij-yadii iyo adeegyadii aad heshay sannad –kii ina soo dhaafay. Hubi, in aad ku darted kuwa soo socda: Ballamaha aad shaqaalaha la yeelatay, kooxaha iyo kulanada aqoon korodhsiyeed, beerta beesha, kooxaha la talinta, iyo guddiyada kooxaha wax wada-qabata.
* 1. Xuruuf ama lambaro sir-ah oo lagu isticmaalo barnaamij (shaqaalaha oo kaliya iyaa loogu talagalay)
* 2. Xuruuf ama lambaro sir-ah oo lagu isticmaalo luqad (shaqaalaha oo kaliya iyaa loogu talagalay)
* 3. Waxaan ka jawaabayaa sahan -kan anoo ka qaybgalaya-jooga:
Killiniga Caafimaadka – PQ
Killiniga Caafimaadka – Koonfurta Nepean
Killinigi Caafimaadka – Dugsiga Sare ee Woodroffe
Barnaamijka ka hortaga dhicitaanka
Caafimaadka Assisiga ah ee loogu fidiyo Dadka waawayn meelahooda
Kooxda Caafimaadka Maskaxda ee Beesha
Maareynta Xaalada loo adeegaha
Ugu horayn Qoyska
Waxa maqalka ilmaha
Wax araga liita
Adeegyada Da’da dugsiga ka yar (meel ay currurtu ku ciyaarto tii oo waalidku la jooga, meel ay yaalaan waxyaabaha caruurtu ku ciyaarto)
U diyaar-noqoshada Dugsiga (leaping lizards, backpack adventures)
Aqoon kororsiyo Waalidiin loogu talagalay
Adeegyada Dhalmmada ka Hore iyo ka Dib.
Nasinta Qoysaska dagan quriga Qoyska
Guriga Beesha – Michele Heights
Guriga Beesha – Morrison Gardens
Guriga Beesha – Pinecrest Terrace
Guriga Beesha – Winthrop Court
Guriga Beesha – Foster Farm
Barnaamijka shaqo u raadinta Dhalinyarada
Shaqada Ontario – Adeegyada Shaqada
Gaadhista Dhaqamada kala duwan ee beesha
Barnaamijyada Dhaqammada kala duwan
Barnaamijka Dhalinyarada Soomaaliyeed
Gabdho Walaalo Midoobay ah
Kor u qaadida Caafimaadka – PQ
Kor u qaadida Caafimaadka – South Nepean
Kor u qaadida Caafimaadka – Bayshore
Wadiiqooyin wax Barasho
Wax kale, fadlan qeex:
* 4. Fadlan falan soo socda.
Xoog u Waafaqsa Waafaqsan Diidan Xoog u Diidan Ma Garanayo Ima khusayso
Soo-dhawayn iyo ogolaansho ayaan dareemaa marka aan imaado barnaamijkan ama adeegan.
Soo-dhawayn iyo ogolaansho ayaan dareemaa marka aan imaado barnaamijkan ama adeegan. Xoog u Waafaqsa
Soo-dhawayn iyo ogolaansho ayaan dareemaa marka aan imaado barnaamijkan ama adeegan. Waafaqsan
Soo-dhawayn iyo ogolaansho ayaan dareemaa marka aan imaado barnaamijkan ama adeegan. Diidan
Soo-dhawayn iyo ogolaansho ayaan dareemaa marka aan imaado barnaamijkan ama adeegan. Xoog u Diidan
Soo-dhawayn iyo ogolaansho ayaan dareemaa marka aan imaado barnaamijkan ama adeegan. Ma Garanayo
Soo-dhawayn iyo ogolaansho ayaan dareemaa marka aan imaado barnaamijkan ama adeegan. Ima khusayso
Way i ixtiraamaan xubnaha ka tirsan shaqaalaha barnaamijkani ama adeegani.
Way i ixtiraamaan xubnaha ka tirsan shaqaalaha barnaamijkani ama adeegani. Xoog u Waafaqsa
Way i ixtiraamaan xubnaha ka tirsan shaqaalaha barnaamijkani ama adeegani. Waafaqsan
Way i ixtiraamaan xubnaha ka tirsan shaqaalaha barnaamijkani ama adeegani. Diidan
Way i ixtiraamaan xubnaha ka tirsan shaqaalaha barnaamijkani ama adeegani. Xoog u Diidan
Way i ixtiraamaan xubnaha ka tirsan shaqaalaha barnaamijkani ama adeegani. Ma Garanayo
Way i ixtiraamaan xubnaha ka tirsan shaqaalaha barnaamijkani ama adeegani. Ima khusayso
Barnaamijyada iyo adeegyada waxa loo fidiyaa si ii suurto-galisa inaan qaadan karo(meel aan ka gali karo, waqtiyo, luqada, iwlm.)
Barnaamijyada iyo adeegyada waxa loo fidiyaa si ii suurto-galisa inaan qaadan karo(meel aan ka gali karo, waqtiyo, luqada, iwlm.) Xoog u Waafaqsa
Barnaamijyada iyo adeegyada waxa loo fidiyaa si ii suurto-galisa inaan qaadan karo(meel aan ka gali karo, waqtiyo, luqada, iwlm.) Waafaqsan
Barnaamijyada iyo adeegyada waxa loo fidiyaa si ii suurto-galisa inaan qaadan karo(meel aan ka gali karo, waqtiyo, luqada, iwlm.) Diidan
Barnaamijyada iyo adeegyada waxa loo fidiyaa si ii suurto-galisa inaan qaadan karo(meel aan ka gali karo, waqtiyo, luqada, iwlm.) Xoog u Diidan
Barnaamijyada iyo adeegyada waxa loo fidiyaa si ii suurto-galisa inaan qaadan karo(meel aan ka gali karo, waqtiyo, luqada, iwlm.) Ma Garanayo
Barnaamijyada iyo adeegyada waxa loo fidiyaa si ii suurto-galisa inaan qaadan karo(meel aan ka gali karo, waqtiyo, luqada, iwlm.) Ima khusayso
Barnaamijyada iyo adeegyadu waxay awwoodaan in ay meeleeyaan naafanimadeyda.
Barnaamijyada iyo adeegyadu waxay awwoodaan in ay meeleeyaan naafanimadeyda. Xoog u Waafaqsa
Barnaamijyada iyo adeegyadu waxay awwoodaan in ay meeleeyaan naafanimadeyda. Waafaqsan
Barnaamijyada iyo adeegyadu waxay awwoodaan in ay meeleeyaan naafanimadeyda. Diidan
Barnaamijyada iyo adeegyadu waxay awwoodaan in ay meeleeyaan naafanimadeyda. Xoog u Diidan
Barnaamijyada iyo adeegyadu waxay awwoodaan in ay meeleeyaan naafanimadeyda. Ma Garanayo
Barnaamijyada iyo adeegyadu waxay awwoodaan in ay meeleeyaan naafanimadeyda. Ima khusayso
Shaqaale waan heli karaa marka aan u baahdo.
Shaqaale waan heli karaa marka aan u baahdo. Xoog u Waafaqsa
Shaqaale waan heli karaa marka aan u baahdo. Waafaqsan
Shaqaale waan heli karaa marka aan u baahdo. Diidan
Shaqaale waan heli karaa marka aan u baahdo. Xoog u Diidan
Shaqaale waan heli karaa marka aan u baahdo. Ma Garanayo
Shaqaale waan heli karaa marka aan u baahdo. Ima khusayso
Waan aqaanaa si aan u dhiibto ra'yi ama aan u dacwoodo.
Waan aqaanaa si aan u dhiibto ra'yi ama aan u dacwoodo. Xoog u Waafaqsa
Waan aqaanaa si aan u dhiibto ra'yi ama aan u dacwoodo. Waafaqsan
Waan aqaanaa si aan u dhiibto ra'yi ama aan u dacwoodo. Diidan
Waan aqaanaa si aan u dhiibto ra'yi ama aan u dacwoodo. Xoog u Diidan
Waan aqaanaa si aan u dhiibto ra'yi ama aan u dacwoodo. Ma Garanayo
Waan aqaanaa si aan u dhiibto ra'yi ama aan u dacwoodo. Ima khusayso
Shaqaaluhu way tixgeliyaan xaalada-hayga gaarka ah (sida, hab-nololeedka, dakhliga, caadooyinka iyo dhaqamada) marka ay ii fidinayaan kaalmo.
Shaqaaluhu way tixgeliyaan xaalada-hayga gaarka ah (sida, hab-nololeedka, dakhliga, caadooyinka iyo dhaqamada) marka ay ii fidinayaan kaalmo. Xoog u Waafaqsa
Shaqaaluhu way tixgeliyaan xaalada-hayga gaarka ah (sida, hab-nololeedka, dakhliga, caadooyinka iyo dhaqamada) marka ay ii fidinayaan kaalmo. Waafaqsan
Shaqaaluhu way tixgeliyaan xaalada-hayga gaarka ah (sida, hab-nololeedka, dakhliga, caadooyinka iyo dhaqamada) marka ay ii fidinayaan kaalmo. Diidan
Shaqaaluhu way tixgeliyaan xaalada-hayga gaarka ah (sida, hab-nololeedka, dakhliga, caadooyinka iyo dhaqamada) marka ay ii fidinayaan kaalmo. Xoog u Diidan
Shaqaaluhu way tixgeliyaan xaalada-hayga gaarka ah (sida, hab-nololeedka, dakhliga, caadooyinka iyo dhaqamada) marka ay ii fidinayaan kaalmo. Ma Garanayo
Shaqaaluhu way tixgeliyaan xaalada-hayga gaarka ah (sida, hab-nololeedka, dakhliga, caadooyinka iyo dhaqamada) marka ay ii fidinayaan kaalmo. Ima khusayso
Ilaa intaan ka qayb-qaatay barnaamijkan, waxan dareemaa inaan ku xidhanahay beeshayda.
Ilaa intaan ka qayb-qaatay barnaamijkan, waxan dareemaa inaan ku xidhanahay beeshayda. Xoog u Waafaqsa
Ilaa intaan ka qayb-qaatay barnaamijkan, waxan dareemaa inaan ku xidhanahay beeshayda. Waafaqsan
Ilaa intaan ka qayb-qaatay barnaamijkan, waxan dareemaa inaan ku xidhanahay beeshayda. Diidan
Ilaa intaan ka qayb-qaatay barnaamijkan, waxan dareemaa inaan ku xidhanahay beeshayda. Xoog u Diidan
Ilaa intaan ka qayb-qaatay barnaamijkan, waxan dareemaa inaan ku xidhanahay beeshayda. Ma Garanayo
Ilaa intaan ka qayb-qaatay barnaamijkan, waxan dareemaa inaan ku xidhanahay beeshayda. Ima khusayso
Ilaa intaan ka qayb-qaatay barnaamijkan, waxan ogaaday adeegyada iyo hantida ka jirta beeshayda.
Ilaa intaan ka qayb-qaatay barnaamijkan, waxan ogaaday adeegyada iyo hantida ka jirta beeshayda. Xoog u Waafaqsa
Ilaa intaan ka qayb-qaatay barnaamijkan, waxan ogaaday adeegyada iyo hantida ka jirta beeshayda. Waafaqsan
Ilaa intaan ka qayb-qaatay barnaamijkan, waxan ogaaday adeegyada iyo hantida ka jirta beeshayda. Diidan
Ilaa intaan ka qayb-qaatay barnaamijkan, waxan ogaaday adeegyada iyo hantida ka jirta beeshayda. Xoog u Diidan
Ilaa intaan ka qayb-qaatay barnaamijkan, waxan ogaaday adeegyada iyo hantida ka jirta beeshayda. Ma Garanayo
Ilaa intaan ka qayb-qaatay barnaamijkan, waxan ogaaday adeegyada iyo hantida ka jirta beeshayda. Ima khusayso
Guud ahaan, mabsuud baan ka ahay barnaamijkan ama adeegan.
Guud ahaan, mabsuud baan ka ahay barnaamijkan ama adeegan. Xoog u Waafaqsa
Guud ahaan, mabsuud baan ka ahay barnaamijkan ama adeegan. Waafaqsan
Guud ahaan, mabsuud baan ka ahay barnaamijkan ama adeegan. Diidan
Guud ahaan, mabsuud baan ka ahay barnaamijkan ama adeegan. Xoog u Diidan
Guud ahaan, mabsuud baan ka ahay barnaamijkan ama adeegan. Ma Garanayo
Guud ahaan, mabsuud baan ka ahay barnaamijkan ama adeegan. Ima khusayso
Guud ahaan, waan ka faa'iidastay ka qayb-qaadashada barnaamijkan.
Guud ahaan, waan ka faa'iidastay ka qayb-qaadashada barnaamijkan. Xoog u Waafaqsa
Guud ahaan, waan ka faa'iidastay ka qayb-qaadashada barnaamijkan. Waafaqsan
Guud ahaan, waan ka faa'iidastay ka qayb-qaadashada barnaamijkan. Diidan
Guud ahaan, waan ka faa'iidastay ka qayb-qaadashada barnaamijkan. Xoog u Diidan
Guud ahaan, waan ka faa'iidastay ka qayb-qaadashada barnaamijkan. Ma Garanayo
Guud ahaan, waan ka faa'iidastay ka qayb-qaadashada barnaamijkan. Ima khusayso